Aza Mivadika Amin’ny Vadinao | Fianakaviana Sambatra
‘Aoka izay nampiraisin’Andriamanitra zioga, tsy hosarahin’olona.’—Marka 10:9
Tian’i Jehovah tsy hivadika isika. (Salamo 18:25) Tena ilain’ny mpivady io toetra io, satria tsy afaka ny hifampatoky ny mpivady raha tsy samy olona tsy mivadika. Tena ilaina anefa ny mifampatoky raha te hifankatia kokoa.
Tsy mora ny miezaka ny tsy hivadika amin’ny vady ankehitriny. Tokony ho tapa-kevitra ny hanao ireto zavatra roa ireto ianao, raha te hiaro ny fanambadianao:
1 AZA ATAO TSIRAMBINA MIHITSY NY FANAMBADIANAO
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? ‘Fantaro tsara izay zava-dehibe kokoa.’ (Filipianina 1:10) Anisan’ny zava-dehibe indrindra eo amin’ny fiainanao ny fanambadianao, ka aza atao tsirambina mihitsy.
Tian’i Jehovah raha ny vadinao no ahinao voalohany. Asainy miaraka ‘mankafy ny fiainana’ koa ianareo. (Mpitoriteny 9:9) Milaza mazava izy fa tsy tokony hanao tsirambina ny vadinao ianao, ary samy tokony hiezaka hitady fomba ampifaliana ny andaniny avy ianareo. (1 Korintianina 10:24) Ataovy tsapany hoe ilainao izy sady tianao.
Manokàna foana fotoana hiarahana, ary aza mieritreritra zavatra hafa amin’iny fotoana iny
Asio fiheverana foana ny vadinao
2 AROVY NY FONAO
INONA NO LAZAIN’NY BAIBOLY? “Izay rehetra tsy mitsahatra mijery vehivavy ka maniry hanao firaisana aminy, dia efa nanitsakitsa-bady tao am-pony sahady.” (Matio 5:28) Azo lazaina hoe mivadika amin’ny vadiny ny olona iray, raha mieritreritra zava-dratsy foana.
Hoy i Jehovah: “Arovy ny fonao.” (Ohabolana 4:23; Jeremia 17:9) Ilaina ny mifehy ny maso mba hiarovana ny fo. (Matio 5:29, 30) Manahafa an’i Joba. Nanao fifanekena tamin’ny masony izy mba tsy hijerijery vehivavy hafa. (Joba 31:1) Aoka ianao ho tapa-kevitra tsy hijery sary vetaveta mihitsy. Tokony ho tapa-kevitra koa ianao hoe tsy ho raiki-pitia amin’olon-kafa ankoatra ny vadinao.
Ataovy fantatry ny olona hoe an’ny vadinao irery ianao
Hevero ny fihetseham-pon’ny vadinao, ka tapaho avy hatrany ny fifandraisanao amin’ny olona iray raha tsy azoazon’ny vadinao ilay izy
ATAOVY IZAY TOKONY HATAONAO
Mandiniha tena amin’ny saina tsy miangatra, ka fantaro izay tokony hahitsinao. (Salamo 15:2) Aza menatra mangataka fanampiana. (Ohabolana 1:5) Raha manana eritreri-dratsy ianao, dia miezaha foana hanala an’ilay izy ao an-tsainao. Aza kivy. (Ohabolana 24:16) Hotahin’i Jehovah ny ezaka ataonao mba tsy hivadika amin’ny vadinao.
Inona no azoko atao mba hananako fotoana betsaka kokoa hiarahana amin’ny vadiko?
Ny vadiko ve no namako akaiky indrindra?
Aminao ve ny voadim-panambadiana toy ny rojo vy mangeja, sa toy ny vatofantsika miaro ny fanambadiana tsy ho rava?